Nagu saabsan - Guangzhou Zeno Electronics Co., Ltd.
Waxaan nahayganacsi diiradda saaraya R&D, soosaarka iyo iibinta qalabka durugsan ee maqalka iyo muuqaalka ah. Waxaan ka kooban nahay R&D, teknolojiyad, wax soo saar, tayo, suuqgeyn, adeegga iibka kadib iyo waaxyo kale oo leh boqolaal shaqaale ah. Waxaan ahaan jirnay soo saare xirfadle ah soosaarka maqalka iyo muuqaalka qalabka warshadaha sanado badan oo howlkar ah, shaqaale aad ufiican iyo maalgashi qalabka wax soo saarka horumarsan, Waxaan bixinayna qiimo tartan ah iyadoo la adeegsanaayo isbadalada cusub iyo teknoolojiyada oo ay weheliso wax soo saar tayo sare leh ， waxaan ku guuleysanay inaan xakameyno silsiladda tiknoolajiyada oo dhan: laga bilaabo soo saarista khadkayaga wax soo saarka. Dhammaan alaabooyinkeennu waxay maraan tijaabooyin adag iyo wejiyada horumarinta wax soo saarka, ka hor intaan la siinin iib. lana ilaaliyo heerarka ugu sareeya ee wax soo saarka iyo deegaanka shaqada. Jawaab celinta macaamiisha ee alaabada ayaa si toos ah naloo siiyaa si loo hagaajiyo wax soo saarka mustaqbalka.
Kuweenawaxyaabaha ugu muhiimsan waa TV-yada TV-yada, qaansooyinka borojektariga, qaansooleyaasha desktop-ka, gaari-gacmeedka mobilada shirarka fiidiyowga, xalalka xafiiska ergo. iyo qalabka kale ee la xiriira. Calaamadeena waxay noqotay sumcad caan ku ah warshadaha. Dhanka iibka, gudaha waxaa loo qaybin karaa iibka gudaha iyo kan dhoofinta.
Lehkooxda naqshadeynta, xirmada macmiilka la habeeyay, si deg deg ah oo sax ah u helaya baahida macaamiisha ， waxay soosaaraysay oo qeybineysay xalal tayo sare leh oo lagu dhejinayo TV-yada. Habkani wuxuu tirtirayaa kharashaadka dhexe ama iibka jumlada, taas oo noo oggolaanaysa inaan u gudbinno keydkeena macaamiisheenna. sidoo kale waxaan ka iibinaa tafaariiqleyda waaweyn ee internetka sida Amazon iyo Walmart.
Waxaan rabnaa inaad ku raaxeysatid qalabkaaga cusub sida ugu dhaqsaha badan adigoon kharash badan kugu kordhin, iyo qaab kale oo aad ku dhahdo, "Mahadsanid!". Waxaan ka mahadcelineynaa taageeradaada joogtada ah, waana sii wadaynaa inaan ku dadaalno siyaabo aan ugu gudbin karno keydyo dheeri ah martigeenna qiimaha leh. Noo soo sheeg sida qalabkaaga cusub uu kuugu shaqeynayo adiga!
Waxaan haynaa daraasiin wakiilo gobaleedyo ah iyo shirkadleyaal dhamaan Shiinaha oo dhan, sidaa darteed kanaalka qaangaadhka iyo xasiloonida kanaalka ayaa la aasaasay.
Waxaan ogaanay caymiska buuxa ee shabakadaha internetka iyo qad la'aanta oo ku tiirsan barta internetka e-commerce ee xoogga leh halkaas oo aan si firfircoon ula shaqeyno shirkadaha caanka ah ee e-commerce sida JD.com, Tmall, Taobao, Suning iyo Pinduodu